Rouhani ayaa wuxuu ku baaqay in la qaado xayiraadda lagu soo rogay baraha bulshada.
Dibadbaxyada oo bilowday muddo ku dhow laba toddobaad, ayaa dowladda Iran waxay xayiraad ku soo rogtay adeegyada baraha bulshada ee fariimaha, sida Instagram iyo Telegram.
Mas’uuliyinta ayaa shalay qaaday xayiraaddii ay ku soo rogeen adeegga Instagram, balse waliba waxaa xidhan addeegga Telegram.
Kuxigeenka madaxa garsoorka Iran, Hamid Shahriari ayaa sheegay maanta in dhammaan shaqsiyaadki hore kacayay “rabshadihii dhacay” la xiray isla markaana ay wajihi donaan ciqaab aad u daran.
Dibadbaxyada dowladda looga soo horjeeday ayaa ah kuwii ugu weynaa ee dalkaasi ka dhaca tan iyo 2009-kii. Dadka dibadbaxa sameynaya ayaa ka cabanaya shaqo la’aan iyo waliba kororka qiimaha cuntada, iyagoo sidoo kale ku baaqay isbeddallom dowladda lagu sameeyo. Dibaxbayo kale oo dhacay ayaa waxaa lagu taageeray dowladda.
Ugu yaraan 21 qof ayaa dhintay in kabadan boqolaal kalena waa la xiray inta ay socdeen dibadbaxyadu.
Hoggaamiyayaasha Iran ayaa dowladdaha ajanbiga ah ku eedeeyay, gaar ahaa Maraykanka iyo Sacuudiga inay kicinayeen dibadbaxayaasha.
Javad Zarif, Wasiirka arrimaha dibedda Iran ayaa sheegay in shacabka reer Iran ay xaq u leeyihiin inay dibadbaxyaan, wuxuuse soo jeediyay in Maraykanka iyo xulufadiisa bariga dhexe aysan xaq iyagu lahayn. Zarif wuxuu kaloo ka sheegay shir dhinaca amniga ku saabsan oo Tehran maanta ka dhacay in dalna aanu amni heli karin, haddii uu amni darro ka abuurayo dalal kale.